AHITSIO ERR_CONNECTION_CLOSED AMIN'NY CHROME - MALEFAKA
Ahitsio Err_Connection_Closed amin'ny Chrome
Ity hadisoana ity dia vokatry ny fanefena tsy mety amin'ny fitaovan'ny tambazotranao na indraindray noho ny tsy fitovian'ny taratasy fanamarinana mpizara. Ny olana lehibe dia isaky ny mipoitra ity hafatra diso ity dia tsy hiditra amin'io tranokala manokana io ianao. Na izany na tsy izany, tsy mila miditra amin'ny antsipiriany ianao hamahana ity olana ity, ary ny Err_Connection_Closed dia azo amboarina mora foana amin'ny fanarahana ireo dingana voatanisa etsy ambany.
Fomba 1: Avereno ny TCP/IP sy ny DNS Flush
Fomba 2: Manadio ny cache navigateur
Fomba 3: Mampiasa Google DNS
Fomba 4: Fanavaozana ny Chrome na Avereno ny fikandrana navigateur
Fomba 5: Ampiasao ny fitaovana fanadiovana Chome
1. Esory fanitarana Chrome tsy ilaina izay mety hiteraka io olana io.
2. Ny fifandraisana mety dia avela Chrome amin'ny alàlan'ny Windows Firewall .
3. Ataovy azo antoka fa manana fifandraisana Internet mety ianao.
efatra. Atsaharo na esory ny VPN rehetra na serivisy proxy ampiasainao.
1. Tsindrio havanana amin'ny Windows Button ary mifidiana Command Prompt (Admin) .
2. Soraty izao baiko manaraka izao ary tsindrio ny Enter aorian'ny tsirairay:
3. Sokafy indray ny Admin Command Prompt ary soraty izao manaraka izao ary tsindrio ny Enter aorian'ny tsirairay:
4. Avereno indray raha hampihatra fanovana. Ny DNS flushing dia toa Ahitsio Err_Connection_Closed amin'ny Chrome.
1. Sokafy ny Google Chrome ary tsindrio Ctrl + Shift + Del hanokatra History.
2. Raha tsy izany, tsindrio ny kisary misy teboka telo (Menu) ary mifidiana Fitaovana bebe kokoa tsindrio avy eo Fafao ny angona fitetezana.
3.Hamarino/tsindrio ny boaty eo akaikiny Tantara fitetezana , Cookies, ary angona tranokala hafa ary sary sy rakitra voatahiry.
efatra.Tsindrio ny menio midina eo akaikin'ny Time Range ary mifidiana Amin'ny fotoana rehetra .
5.Farany, tsindrio ny Clear Data bokotra.
6. Akatona ny navigateur ary avereno indray ny PC-nao.
Ny teboka eto dia, mila mametraka ny DNS ianao hamantatra ho azy ny adiresy IP na hametraka adiresy manokana nomen'ny ISP anao. Fix Err_Connection_Closed amin'ny Chrome Error Mipoitra rehefa tsy voapetraka ny iray amin'ireo fandrindrana. Amin'ity fomba ity dia mila mametraka ny adiresy DNS amin'ny solosainao amin'ny mpizara DNS Google ianao. Araho ireto dingana ireto mba hanaovana izany:
1. Tsindrio havanana ny Kisary tambajotra azo alaina eo amin'ny ilany havanana amin'ny tontonana taskbar. Tsindrio izao ny misokatra Network & Sharing Center safidy.
2. Rehefa ny Tambajotra sy Fizarana Center misokatra ny varavarankely, tsindrio ny tambajotra mifandray amin'izao fotoana izao eto .
3. Rehefa tsindrio ny tambajotra mifandray , hivoaka ny varavarankely sata WiFi. Tsindrio ny Properties bokotra.
4. Rehefa mipoitra ny varavarankelin'ny fananana, tadiavo Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ao amin'ny fifaneraserana faritra. Tsindrio indroa eo.
5. Ankehitriny dia hiseho ny varavarankely vaovao raha toa ka napetraka amin'ny fampidirana mandeha ho azy na manual ny DNS-nao. Eto ianao dia mila manindry ny Ampiasao ireto adiresy mpizara DNS manaraka ireto safidy. Ary fenoy ny adiresy DNS nomena ao amin'ny fizarana fampidirana:
6. Jereo ny Hamarino ny fanovana rehefa mivoaka boaty ary tsindrio OK.
Akatona ny varavarankely rehetra ary sokafy ny Chrome hanamarina raha afaka manao izany ianao Fix Err_Connection_Closed in Chrome Error in Google Chrome.
6. Akatona ny zava-drehetra ary jereo indray raha voavaha ny fahadisoana na tsia.
Fomba 4: Fanavaozana Chrome na Avereno ny fikandrana navigateur
a. Nohavaozina ny Chrome
Ny fampiasana dikan-teny tranainy kokoa amin'ny Chrome dia mety hahatonga ny Ahitsio Err_Connection_Closed amin'ny Chrome . Tsara kokoa raha nanandrana nanamarina dikan-teny vaovao ianao ary nanavao ny navigateur. Havaozy ny navigateur ary jereo raha tsy misy ny fahadisoana. Ity ny fomba ahafahanao manavao ny Chrome:
1. Voalohany, tsindrio ny teboka telo eo amin'ny zorony ambony havanana amin'ny varavarankely navigateur ary mankanesa any amin'ny Fizarana fanampiana . Eo ambanin'ity fizarana ity, safidio Momba ny Google Chrome .
2. Hisokatra ny varavarankelin'ny About Chrome ary hanomboka hikaroka ho azy ireo fanavaozana azo alaina. Raha misy dikan-teny vaovao misy, dia hanome anao safidy hanavao.
3. Havaozy ny navigateur ary avereno jerena raha mety aminao izany.
Koa satria ny navigateur Chrome no olana, dia azo antoka fa hanampy amin'ny famahana ny olana ny famerenana ny toe-javatra Chrome. Ireto ny dingana hamerenana ny firafitry ny navigateur Chrome anao:
1. Voalohany indrindra, tsindrio ny teboka telo eo amin'ny zoro ambony havanana amin'ny varavarankely navigateur ary safidio ny Settings. Ao amin'ny tabilao Settings, midira mankany amin'ny farany ambany ary tsindrio eo Fikirana mandroso .
2. Ao amin'ny fizarana mandroso dia midira mankany amin'ny Avereno ary diovy fizarana ary tsindrio eo amin'ny Avereno amin'ny toeran'ny tany am-boalohany.
3. Ao amin'ny Reset Settings varavarankely, tsindrio ny Reset Settings bokotra. Rehefa vita ny famerenana dia avereno indray ny navigateur ary jereo raha nahomby io fomba io.
Ny ofisialy Fitaovana fanadiovana Google Chrome manampy amin'ny fisavana sy hanesorana rindrambaiko izay mety hiteraka olana amin'ny chrome toy ny fianjerana, pejy fanombohana tsy mahazatra na barazy, doka tsy ampoizina tsy azonao esorina, na manova ny traikefanao amin'ny fitetezana.
Tena hanampy anao ireo fanamboarana etsy ambony ireo Ahitsio Err_Connection_Closed amin'ny Chrome fa raha mbola sendra ny fahadisoana ianao dia ho fomba farany azonao atao apetraho indray ny navigateur Chrome anao.
Fix tsy afaka mifandray amin'ny Proxy Server Error Code 130
Amboary ny ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH Chrome Error
Ahoana ny fanamboarana Ity tranokala ity dia tsy azo tratrarina ao amin'ny Google Chrome
Ny fomba fanamboarana ny taratasy fanamarinana Server dia nofoanana tao amin'ny chrome
Izany no fahombiazanao Ahitsio Err_Connection_Closed amin'ny Chrome fa raha mbola manana fanontaniana momba izany ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra.
Aditya dia manam-pahaizana momba ny teknolojian'ny fampahalalam-baovao ary efa mpanoratra teknolojia nandritra ny 7 taona farany. Izy dia mirakitra ny serivisy Internet, finday, Windows, rindrambaiko ary torolàlana momba ny fomba.